कैदी भगाएको आरोपमा इनेस्पेक्टर जेलमा – YesKathmandu.com
कैदी भगाएको आरोपमा इनेस्पेक्टर जेलमा
सोमबार ०२, चैत २०७१
काठमाडौ, । लागु औषध मुद्दामा १५ बर्ष कैद पाएका कैदी भगाउन कारागारका सुरक्षा प्रमुख नै दोषी देखिएका छन् । डिल्लीबजार कारागार सुरक्षा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रकृष्ण रञ्जितलाई डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले हिरासतमा राखेको छ । १५ बर्ष कैद सजाय पाएका पासाङ शेर्पालाई भगाउन सहयोग गरेको अभियोगमा काण्डमा उनलाई पक्राउ पुर्जि दिएर आईतबार जिल्ला इनेस्पेक्टर पक्राउ परेका हुन् ।
रञ्जितलाई फागुन २६ गते शेर्पालाई भगाउन मुख्य भुमिका निर्वाह गरेको अभियोग छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासत कक्षमा राखिएको छ । उनीसंगै अरु तीन प्रहरी हवल्दार सुकेन्द्र प्रसाद यादब, जवानद्धय करण महरा र खुमराम पंगाली समेत हिरासतमा छन् । यादब १५ बर्ष अघि जवान पदमा भर्ना भएका थिए । महरा र पंगाली भने दुई बर्ष अघि मात्र प्रहरीमा भर्ना भएका हुन् । प्रहरी निरीक्षक रञ्जितले कैदी भागेपछि आफ्नो माथिल्लो निकाय र कारागार प्रशासनलाई गुमराहमा राखेका थिए । कैदी पासाङलाई उपचारका लागि अस्पताल लिएर जाने प्रहरी हवल्दार सुकेन्द्रप्रसाद यादबले प्रहरी निरीक्षक रञ्जितकै निर्देशनमा उनलाई आखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरबाट बौद्ध लगेको बयान दिएका छन् । इन्सपेक्टर साबले अस्पताल लिएर जानु अघि मलाई उहांको कार्य कक्षमा बोलाएर सानो तिनो अपराधको कैदी हो, बदमासी गर्दैन उसले भनेको ठाउमा लिएर जानु भन्ने आदेश थियो यादबले बयानमा भनेका छन् तर दुई बजे भित्र कारागार प्रवेस गर्नु भनिएको थियो । २०६९ असोजमा हेरोइन सहित पक्राउ परेका पासाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १५ बर्ष कैद र ५ लाख रुपैंया जरिवाना तोकेको थियो ।
हवल्दार यादबले अस्पतालमा काम सकिएपछि उनलाई लिएर बौद्ध गएको बयान दिएका छन् । त्यहा पुगेपछि हत्कडी खोलिदिएका थिए । प्रहरीलाई बाहिर राखेर पासाङ घर भित्र छिरेका थिए । त्यसको केहिसमय पछि श्रीमती बाहिर आएर प्रहरीसंग कुरा गरेको बयान यादबले दिएका छन् । आधा घण्टासम्म पनि नआएपछि घर भित्र पस्दा पुजा कोठाको झ्यालबाट निस्किएर भागिसकेको बयान दिएका छन् । उनले आफ्नो कैदीलाई भगाउने कुनै उद्येश्य नभएको बताएका छन् । ईन्सपेक्टर साबले भनेपछि मानेको हो उनले बयानमा भनेका छन् घटना लगत्तै प्रहरी निरीक्षकलाई जानकारी समेत गराएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रहरी निरीक्षकलाई कैदी भागेको भन्दै बस्ती पातलो भएकाले भेटिनसक्ने जानकारी गराइएको थियो । तर प्रहरी निरीक्षक रञ्जितले हवल्दार यादब सहित सबैलाई ट्याक्सी चढेर तुरुन्त त्रिपुरेश्वर आईपुग्न भनेका थिए । ुआफ्नै आदेशमा कैदीलाई भाग्ने सहज बाटो बनाइदिएपछि पनि घटना ढाकछोप गर्न सुरक्षा प्रमुखले धेरै कोशिस गरेको देखिन्छु अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने ुबौद्धबाट भागेको मान्छेलाई त्रिपुरेश्वरबट भागेको भनेर आखाँमा धुलो हाल्यो ।ु
जसले नक्कली क्रिकेट बनेर बिबिसीलाई अन्तर्वार्ता दिए
नयाँ वित्तीय संस्थाको इजाजतमा रोक
One thought on “कैदी भगाएको आरोपमा इनेस्पेक्टर जेलमा”
रामचन्द्रको आक्रोस : शेरबहादुरजी अझै पार्टी बिभाजनकै मानसिकतामा हुनुहुन्छ
ग्रीलग्रामको व्यवस्था गरिने : उद्योगमन्त्री जोशी
सुझाव संकलनका लागि २ दिन सार्वजनिक विदा
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा सवारी दुर्घटना बढेपछि चेकजाँचमा कडाई
सर्वाेच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालमाथी महाअभियोग लगाउने तयारी
पाँचसय खर्च हुन्छ ८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न
राजनीति र समाजभित्रका सात खाटी दुष्मन !
जात ढाँटी प्रेम, प्रेम टुटेपछि सुन्दरता मास्न एसिड
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनमा : पाँच गभ्भीर त्रुटी !
तराई डुब्दा काठमाडौंमा के गर्दैछन मधेशका नेता ?
पेट चाहिँ पाउनुभएकै रहेछ माननीयज्यू
महानगरपालिकाको भ्रष्टहरुको आड पाएपछि जगदम्बा हस्पिटालिटीको दादागिरी
महाअभियोगलाई ‘कम्युनिष्टहरुको चक्रव्यूह’को संज्ञा दिंदै कांग्रेस : विपक्षमा उभिने संकेत,
संघियता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्न माग
मैयाखोला गाउँपालिकाका सबै वडामा एमाले विजयी
समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाई सकियो,प्रत्यक्षतर्फको तुरुन्तै सुरु गरिने
बिकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने बादलको प्रतिबद्धता